पार्टी फुट्यो क्रिम पाउडर र लिपिस्टिकले ! - Pahilo News
२७ पुस ।
पार्टी फुट्यो क्रिम पाउडर र लिपिस्टिकले ! यो कुनै ठट्टा नभएर थरुहट तराई पार्टीमा भएको घटना हो । व्यवस्थापिका संसदमा समानुपातिकतर्फ जम्मा दुई सांसद रहेको सो पार्टी विभाजित भएर अहिले एक–एक सांसदको बेग्लाबेग्लै पार्टी छन् ।
दहितले गरेको काम आधिकारिक हुने, तर अरुले गरेको काम र कुरा आधिकारिक नहुने भएपछि पार्टीमा समस्या अएको उनले सुनाइन् । विशेषतः लोकमान प्रकरणमा आफू महाअभियोग पक्षधर, दहित महाअभियोग लगाइनु नहुने पक्षधर हुँदा धेरै समस्या भएको उनले बताइन ।
रमाइलो कुरा के छ भने, पार्टीमा दहितभन्दा गंगा पुरानी नेता हुन् । दहित शाही शासन ढलेपछि पार्टीमा प्रवेश गरे, गंगाचाहिँ संयुक्त थारु राज्य परिषद्देखि नै आन्दोलनमा सहभागी थिइन् ।